Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya oo kormeertay Iskuul ku yaal Muqdisho – Radio Daljir
Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya oo kormeertay Iskuul ku yaal Muqdisho
Abriil 7, 2015 9:15 b 0
Talaado, Abriil 07, 2015 (Daljir) —Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada,Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Dowladda Federalka Soomaaliya Drs Khadar Bashiir Caliayaa maanta booqatay Iskuulada Dowladda ee lacag la’aanta gaar ahaan Iskuulka 11 Janaayo oo ku yaalo Degmada Cabdicaziis ee Magaalada Muqdishu.
Wasiirka Waxbarashada Khadar Bashiir Cali ayaa soo indha indheysay qaabka Waxbarashadu ay u socoto iyadoo si toos ah Su’aalo mid mid u weydiineysay Ardayda Fasalada ku jirtay.
Wasiir Khadar ayaa oo saxaafada la hadashay ayaa sheegtay in ay ku faraxsantahay qaabka waxbarshadu u socoto waxayna ardayda ku dhiira-galisay in ay si wanaagsan uga faa,iidaystaan waxbarashada lacag la,aanta ah ee loo simanyahay waxaana ay balan qaaday in ay kor u qaadidoonaan tayada Goobaha waxbarasho ee dowladdu gacanta ku hayso iyadoona sheegtay in sanaadkaan ay wasaaradu qaadi doonto Imtixaan midaysan oo dalka oo dhan ah.
Wasiir Dr Khadar Bashiir ayaa faslada Iskuulka mid mid u booqatay, waxeyna sheegtay in Ubadka Soomaaliyeed ee wax ku baranaya dalkooda sida kuwaan oo kale ay mudanyihiin in la dhiiragaliyo oo laga taageero sidii kor loogu qaadi lahaa aqoontooda.
Sidoo kale Wasiirada ayaa xustay in Wasaaradda Waxbarshada ay ka go’antahay soo nooleynta iyo xoojinta Iskuulada Dowladda si Canug waliba oo Soomaaliyeed uu u helo Waxbarsho lacag la’aan ah.
Ugu danbeyntii Maamulka iyo Macalimiinta Iskuulada Dowlada ayaa uga mahad celiyey Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta sare booqashada ay ku tagtay Iskuulada taas oo ay ku dhiira galineyso Waxbarashada loo simanyahay ee bilaashka ah.
Guddoomiye ku xigeenka Labaad ee Maamulka Gobolka Mudug oo ka Bad-baaday Iskuday Dil
Wasiirka Duulista Hawada iyo Garoomada Puntlnad oo ka Warbixiyay Guulaha laga Gaaray Mashaariic socda[DHAGAYSO]